Myanmar Hosts Negotiation Meeting of Drawing ASEAN Tourism Professionals Mutual Recognizition Arrangement Plan (2018-2020)
by MO HT | Dec 11, 2017 | News |0Comments
Nay Pyi Taw, December 11 Negotiation Meeting of Drawing ASEAN Tourism Professionals Mutual Recognizition Arrangement Plan (2018-2020) was held in Mingalar Thiri Hotel in Nay Pyi Taw at 9:00 AM this morning and U Yee Mon, Permanent Secretary for Ministry of Hotels and...
Financial Specialist (Project Management Unit-Accountant) (National) အတွက် အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)တို့အကြား အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အရှေ့အနောက်စီးပွားရေး စင်္ကြန်လမ်းကြောင်းတစ် လျှောက်ရှိ နွမ်းပါးသူများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar:...
Celebrating the Opening Ceremony of Macro Marathon and Mini Marathon Race at Kalaw Heritage Hotel
Nay Pyi Taw, December 11 With the cooperation of Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar Hotelier Association (Southern Shan State Zone), Tour Guide Association(Kalaw) and Run Myanmar Team, the opening ceremony of Macro Marathon and Mini Marathon Race was celebrated...
by MO HT | Dec 8, 2017 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့်နေရာများ၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာယဉ် ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များ၊ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ...
Union Minister U Ohn Maung attends community-based tourism standards conference
by MO HT | Dec 7, 2017 | News |0Comments
Nay Pyi Taw, December7Union Minister U Ohn Maung attended and delivered an opening speech community-based tourism standards conference in Mingalar Thiri Hotel in Nay Pyi Taw at 9:00 AM. In the speech, Union Minister said since he had taken charge of Ministry of...
နေပြည်တော် ၊ ဒီဇင်ဘာ (၆) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု ၊ Tint Tint Myanmar Group of Companies တို့၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် (၁၅၉၂) ဦး ၊ သင်္ဘောဝန်ထမ်း (၁၉၆၁) ဦး ပါဝင်သော Genting Dream Star Cruise အပျော်စီးသင်္ဘောသည် နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့...
(၄၀) ကြိမ်မြောက် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပ
by MO HT | Dec 5, 2017 | News |0Comments
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ (၄) (၄၀) ကြိမ်မြောက် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို (၄-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက်(၀၉ ၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ်၌ စတင်ကျင်းပရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်း မောင်တက်ရောက်၍...
Closing Ceremony of Special Fire Bridgate was held in Monywa
by MO HT | Dec 4, 2017 | News |0Comments
Naypyitaw , December (4) Closing Ceremony of Special Fire Bridgate was held in Monywa Township Fire Bridgate at 8 am in December 3, 2017 with the cooperation fo Myanmar Fire Service Department (Sagaing Region), Directorate of Hotels and Tourism (Monywa) and Myanmar...